10-ka xiddig ee ciyaara isboortiga noocyadiisa kala duwan ee lacagaha ugu badan ka hela Instagram-ka oo la shaaciyey & CR7 oo hoggaaminaya! – Gool FM
(World) 23 Luulyo 2019. Waxaa la soo saaray 10 xiddig ee ciyaara isboortiga noocyadiisa kala duwan ee lacagaha ugu badan ka sameeya barta Instagram-ka, waxaana hoggaanka u haya Cristiano Ronaldo.
Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa fikta sare kaga jira liiskan xiddigaha isboortiga noocyadiisa kala duwan ciyaara ee lacagaha ugu badan ka hela xayeysiinta ay soo dhigaan barta Instagram-ka.
Cristiano Ronaldo ayaana sida warbixinta lagu sheegay xayeysiin walba oo uu soo dhigo halkii mar ku qaata 784 kun oo gini, iyadoo xiddiga uu macallin Zidane ka dirayo kooxda Real Madrid ee Gareth Bale uu dhankiisa ka soo muuqday 10-ka sare.
HopperHQ ayaa shaaca ka qaaday in xiddigahan tobanka ah ee aan magacyadooda idiin sheegi doono ay lacago xad dhaaf ah ka sameeyaan Instagram-ka, weeraryahanka Juventus ayaana hoggaaminaya.
34-sano jirkaan CR7 ayaa 173 milyan oo raacayaal ah ku leh barta Instagram-ka waxaana ay taasi ka dhigan tahay inuu halkii xayeysiin oo uu soo dhigo ku helo 784 kun oo gini.
Weeraryahanka reer Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain Neymar Jr ayaa ku soo xiga Ronaldo waana xiddiga labaad ee lacagaha ugu badan ka sameeya Instagram-ka, isagoo xayeysiin walba oo uu soo dhigo halkii mar ku qaata 580 kun oo gini.
Kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa booska saddexaad ka soo muuqda liiska xiddigaha isboortiga noocyadiisa kala duwan ee lacagaha ugu badan ka hela xayeysiinta ay soo dhigaan barta Instagram-ka, waxaana Leo uu halkii mar oo uu xayeysiin soo dhigo qaataa 521 kun oo gini.
Ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka England iyo kooxaha Man United & Real Madrid, David Beckham ayaa isagana la sheegayaa inuu halkii mar ee uu wax soo dhigo Instagram-ka uu qaato 287 kun oo gini.
Kaalinta shanaad waxaa ka soo muuqday laacibka kubadda Kolayga ee LeBron James kaasoo isna qaata 219 kun oo gini, markii uu wax soo geliyo Instagram-ka.
Magaca kale ee lixaad waa Ronaldinho inkastoo uu ka fariistay ciyaaraha haddana laacibka reer Brazil ayaa weli suuq-geyn fiican leh, waxaana uu halkii mar oo uu wax soo dhigo qaataa 206 kun oo gini isagoo 47 milyan raacayaal ah ku leh Instagram-ka.
Laacibka ay u badan tahay inuu xagaagan ka tago kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa booska todobaad kaga jira liiskan, waxaana halkii mar ee uu xayeysiin soo dhigo Instagram-ka uu xiddigan reer Wales qaataa 175 kun oo gini.
Zlatan Ibrahimovic oo 37 milyan oo raacayaal ah ku leh Instagram-ka ayaa isaguna ka soo muuqday kaalinta siddeedaad, waxaana halkii mar oo uu xayeysiin soo geliyo bartiisa Instagram-ka uu ka helaa 161 kun oo gini.
Xiddiga kubadda Cricket-ka ee Virat Kohli ayaa ka soo muuqday kaalinta sagaalaad, waxaana uu ka helaa markii uu wax soo dhigo Instagram-ka 158 kun oo gini, waxaana kaalinta 10-aad buuxiyey oo liiskan halka ugu hooseysa ka hoggaaminaya Luis Suarez oo isna halkii mar hela 148 kun oo gini.
Halkaan hoose ka eeg liiska xiddigaha isboortiga noocyadiisa kala duwan ciyaara ee lacagaha ugu badan ka hela xayeysiinta ay soo dhigaan Instagram-ka:-
Xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika oo shaaciyey ganaaxa ay dul dhigeen Lionel Messi